जव प्रेमीले कुमारित्व जाँच गर्न भन्दै शारीरिक सम्पर्क राख्ने प्रस्ताब गर्‍यो….. - www.kchhakhabar.com
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ०७, २०७४ समय: ११:२०:००
दुवैलाई दुवैको फोन दिनमा ५÷१० मिनेटकै किन नहोस् ३÷४ पटक नियमित हुन्थ्यो भने रातमा त घण्टौं हुने कुरा कुनै नौलो नै भएन । नम्रताले भनेकी । उमेर पुगेका केटाकेटी एक अर्कालाई मन पराउनु र एकआपसमा घण्टौंसम्म कुरा गर्नु कसैका लागी पनि कुनै विषयको कुरा होईन । “सानु तिमी मेरी हौ । यस्मा कुनै शंका नगर्नु तर पनि खै किन किन तिमी मेरा लागी कति योग्य छौं जाँच्न मन लागेको छ । तिमी अप्ठेरो मान्दिनौं भने मलाई तिमीसंग एक पटक शारिरीक सम्पर्क गर्न मन लागेको छ ।
सुशीला र गजेन्द्रको प्रेमलाई पनि चिनेजाने जति सबैले समर्थन गर्दै कुनै चर्चाको विषय नै बनाएनन् । तर आफ्नै प्रेम सुशीलाका लागी सोच्दै नसोचेको एउटा विषय बन्न पुग्यो । जस्ले आज सुशीलाको प्रेम कथालाई अधुरो बनाएर दुविधापुर्ण गोरेटोमा उभाई रहेको छ । “सान,ु तिमी मेरी हौ । यस्मा कुनै शंका नगर्नु तर पनि खै किन किन तिमी मेरा लागी कति योग्य छौं जाँच्न मन लागेको छ । तिमी अप्ठेरो मान्दिनौं भने मलाई तिमीसंग एक पटक शारिरीक सम्पर्क गर्न मन लागेको छ ।” गजेको प्रेम जब यसरी यो उद्वरण चिन्ह भित्र कैद भएको वाक्यहरुबाट छरपस्ट भयो त्यसपछि सुशीलालाई उनको आफ्नै प्रेमले दुविधाको गोरेटोमा उभ्याई दियो रे । नम्रताले भनेकी ।
पढने तह फरक भए पनि भेट हुने समय भने प्राय एकै हुन्थ्यो उनीहरुको । प्रत्येक दिनको भेटले दुरी नजिक बनायो उनीहरुको । झण्डै ३ महिना बितेको हुँदो हो । उनीहरुको सम्बन्धले गति लिन लागेको । त्यति बेला धनन्जयले आफ्नो बिवाहको कुरा परिवारले चलाएको भन्दै झुठो बाहाना गरेछ । आफुले माया गरेको मान्छे अरु कसैको बन्छ कि भन्ने डर कस्लाई पो हुँदैन होला र ? लिलाको त्यही डरलाई धनन्जयले बुझ्यो र लिलालाई शारिरीक सम्पर्क भए मात्र विश्वासका साथ परिवारसंग आफुहरुको प्रेम सम्बन्धका बारेमा भन्न सकिने भन्दै यौन पिपासु बनेर लिलाको अस्मितालाई बलि चढाउन सफल भयो ।
लिलालाई त्यो शारिरीक सम्पर्कमा रत्ति भरि पनि कुनै पश्चाताप थिएन । किनभने उस्ले त धनन्जयलाई आफ्नो अस्मिता सुम्पिएर अनौपचारिक रुपमा श्रीमान मानी सकेकी थिई । त्यो पनि उसलाई विश्वास दिलाउनका लागि मात्र । जस्को नतिजामा बाँकी थियो त केवल प्रेमलाई औपचारिकताको शुत्रमा बाँध्दै विवाह गर्न । जुन कुराको बाचा दुवैले जागिर खाएर आफ्नो खुट्टामा उभिए पछि मात्र गर्ने भनेर गरेका थिए । उनीहरुको प्रेमसंगैको शारिरीक सम्पर्कले झण्डै ५ वर्षको यात्रा पुर गर्दै थियो । एकाएक असोजको २२ गते धनन्जयको फेसबुकमा उ अरु नै केटीसंग बैबाहीक जीवनमा गाँसिएको फोटो लिलाले देख्न पुगी ।
एउटी स्त्रीका लागि त्यो जस्तो असैह्य पिडा अरु के नै हुन सक्छ ? हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं । जस्को दुखाई अहिलेसम्म लिलाले सहनु परि रहेको छ । सुशीला र लिला त प्रतिनीधि पात्र मात्र हुन् । यस्तो पिडाबाट बिच्छिप्त भएका स्त्रीहरु गन्न नसकिने संख्यामा छन् । तपाँई हाम्रो समाजमा । बडो